फिल्म अघि नै भिडियोमा आकाश र बर्षाको जोडी – Gandaki Media
फिल्म अघि नै भिडियोमा आकाश र बर्षाको जोडी
हिजोआज कलाकारको जोडी चलचित्रको पर्दामा आउनु अगाडि नै सस्तो बन्न थालेको गुनासो सुनिन्छ । चलचित्रको पर्दामा कलाकारको केमेष्ट्री हेर्नका लागि दर्शकले प्रतिक्षा नै गर्न नपर्ने अवस्था छ । किनकी, युटुबमा भेटिने बग्रेल्ती इन्टरभ्यू, म्यूजिक भिडियोमा दिनदिनै अभिनयका कारण कलाकारको जोडी सस्तो बन्ने गरेका छन् । धेरै जोडीलाई हेरेर पनि यो उदाहरण दिन सकिन्छ ।
निर्देशक मिलन चाम्स ‘विर विक्रम २’को निर्देशन गर्ने तयारीमा छन् । यो चलचित्रमा उनले नायक आकाश श्रेष्ठ र नायिका बर्षा सिवाकोटीलाई मुख्य भूमिकामा लिएका छन् ।
यी दुइको जोडी पर्दामा कस्तो देखिएला, केमेष्ट्री कस्तो देखिएला भन्ने दर्शकलाई कौतुहलता हुन आवश्यक छ । तर, चलचित्रमा लिएको केही दिन नवित्दै मिलनले यी दुइलाई एउटा म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गराएका छन् ।
मिलनले ‘विर विक्रम २’को प्रचार सामाग्री सार्वजनिक नगर्दासम्म यी दुइको केमेष्ट्री नदेखाइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला ? तर, भिडियोमै मिलनले दुइलाई अभिनय गराएर कतै फिस्स त बनाएनन् ?
संसारभरीका अचम्मका दृश्यहरु जस्ता भने त्यस्तै भेटिन्छन इन्टरनेटमा.आफुलाई परिचित गराउन र पैसा कमाउन जस्तो भिडियो बनाएर पनि सामाजिक संजालमा अपलोड हुन्छन अपत्यारिला भिडियोहरु.कोही लाइव आएर अचम्मका दृश्य हरु दर्शाउन्छन् भने कोहीले नया तरिकाका प्रस्तुती देखाउने प्रयत्न गर्छन.यो भिडियोमा भने अलि बेग्लै तरिकाले एक युवतीको अचम्म लाग्दो भिडियो देखाइएको छ. संसारभरीका अचम्मका दृश्यहरु जस्ता भने त्यस्तै […]